मनोरन्जन :: OnlineKhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, entmnt, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview
Online Khabar entmnt मुख्य पृष्ठ
English मनोरन्जन होम
मनोरन्जन यस्ता छन् बलिउड कलाकारका भ्यालेन्टाइन प्लान
मुम्बई । बलिउड स्टार रिलमा मात्रै हैन रियलमा पनि भ्यालेन्टाइनलाई महत्व दिन्छन् । केही कलाकारले भ्यालेन्टाइनको वारेमा खुलेर कुराकानी गरेपछि धेरैले गोप्य राख्न चाहे । श्रीमान एवं श्रीमतिको खुसीका लागि ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मनाउने भनाइमा...
फिल्म समीक्षाः आदित्य र कट्रिनाको सुन्दर अभिनय
चलचित्रः फितुर निर्देशकः अभिषेक कपुर कलाकारः आदित्य राय कपुर, कट्रिना कैफ, तब्बु, लारा दत्त, अदिति राव हैदर, राहुल भट्ट आदि । चाल्स डेकसको उपन्यास ‘द ग्रेट एक्सपेक्टेसन्स’ मा आधारित रहेर निर्देशक अभिषेक कपुरले फिल्म...
‘कमेडी नाइट्स वीथ कपिल’का सबै भिडियो डिलिट
मुम्बई । कलर्स च्यानल र कपिल शर्माविचको विवादका कारण ‘कमेडी नाइट्स वीथ कपिल’ को सम्पूर्ण भिडियो अफिसियल युट्युब पेजवाट डिलेट गरिएको छ । कलर्स च्यानलले उक्त कार्यक्रमको अन्तिम भागको केही दृष्य काटेर प्रशारण गरेको...
झलनाथका गीतको एकल साँझ हुने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्वारा लिखित गीतको एकल साँझ हुने भएको छ । राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घको वाषिर्कोत्सवको अवसरमा आगामी फागुन ७ मा इलाममा ‘जेएन साङ्गीतिक साँझ’ प्रस्तुत हुन लागेको हो । उक्त साँझमा खनालले...
क्लोज अपले शनिबार सिभिल मलमा भ्यालेन्टाइन्स् विशेष कार्यक्रम गर्ने
२९ माघ, काठमाडौं । भ्यालेन्टाइन्स् डे नजिकै आइसक्यो, तपाईंले आफूले माया गर्ने मान्छेसँग आत्मविश्वासको साथ नजिक आउन सोच्नुभएको छ ? यदि त्यसो हो भने क्लोज अप लभ फेस्ट उत्कृष्ट गन्तव्य हुनसक्छ । क्लोज अपले...
‘मलाई रुन पनि आउँदैन, अनि रोएको मान्छेलाई फकाउन पनि आउँदैन,’ आँसु चुहाउँदै जब पर्दामा आर्यन सिग्देल यो संवाद बोल्छन्, धेरैको आँखा उनीसँगै रसाउँछन् । ‘म तिम्रा लागि बोझ त बन्दिनँ नि ?’ नायिका नम्रता...
‘भाग्यले बाँचेकाहरु’ लाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पमा पर्दा समेत मृत्युलाई जित्न सफल केही नेपालीहरुको कथालाई समेटेर तयार पारिएको चर्चित वृत्तचित्र ‘भाग्यले बाँचेकाहरु’ले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न तेस्रो नोइडा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म...
प्रेम नतोड्न प्रेमिकाको आग्रह
चलचित्र प्राविधिक संघका पूर्व महासचिव समेत रहेका अनन्त तिमिल्सिना म्यूजिक भिडियो निर्देशक बनेका छन् । टिका प्रसाइको शब्द, संगीत तथा स्वर रहेको गीत ‘नतोडन’को म्यूजिक भिडियो उनले निर्देशन गरेका हुन् । संझना राइको मोडलिङ...
पहिरनमा कोरियोग्राफरको खुलेकाे शैली
झट्ट हेर्दा उनी कुनै नायिका जस्तो लाग्छिन् । चलचित्रको प्रिमियर होस् या विभिन्न शोमा उनी पुग्दा, उनलाई नचिन्ने दर्शक झुक्किन्छन् । आखिर, उनी कुन नायिका हुन् ? तर, तस्बिरमा देखिएकी यी सुन्दरी नायिका नभएर...
नेपाली चलचित्रमा खेलकुद, फूटबल पछि क्रिकेट
नेपाली चलचित्रले खेलकुदका बिषयमा खासै चलचित्र निर्माण गर्न सकेको छैन । व्यवसायिक चलचित्र निर्माणमा नै निर्माताहरु केन्द्रित रहँदा यस्ता खालका बिषयले स्थान पाउने गरेका छैनन् । तर, कहिलेकाही यस्ता बिषयमा पनि चलचित्र बन्छन्, जसले...
फिल्म हेरुन्जेल प्रेमीको हात छाडिनन् नम्रताले
प्रेमलाई ओपन राख्न चाहने नायिका हुन् नम्रता श्रेष्ठ । उनको जीवनमा जतीजना यूवकको प्रवेश भयो, उनले ओपन रुपमा नै प्रेम गरिन् । रेमन श्रेष्ठ हुन् या प्रेम घले वा अहिलेका प्रेमी दावा शेर्पा नै...
काठमाडौं । यो साता नेपालका सिनेमा हलमा तीन जल्दाबल्दा नायिकाहरुको भिडन्त हेर्न पाइने भएको छ । नायिकाहरु नम्रता श्रेष्ठ, पूजा शर्मा र सुष्मा कार्की अभिनित फिल्महरु क्रमशः क्लासिक, प्रेमगीत र चलेछ बतास सुस्तरी शुक्रबार...